Koox ka dhisan mid ka mid ah Horyaallada Yurub oo Ganaax 10-sano ah Wajaheysa, waa Tuma? | Gooldhalin
Koox ka dhisan mid ka mid ah Horyaallada Yurub oo Ganaax 10-sano ah Wajaheysa, waa Tuma?
Kooxda ka dhisan horyaalka dalka Albania ee Skenderbeu oo ka mid ah Naadiyada loogu jecelyahay dalkaas ayaa wajaheysa Ganaax 10-sano ah oo dhanka kubadda cagta ah, waxayna ka hari doontaa dhammaan tartamada laga ciyaara Uefa.
Waxaa loo heystaa in ay ku shaqeysato xoogaa lacag ah ka qaadashada kooxaha ay ka hortagaan, markaas oo lacagta ay qaataan ay ku oggolaadaan in ay tartanka iyagu ka haraan, kooxda lacagta baxsatayna ay soo gudubto.
Kooxda 6-da mar heysata horyaalka dalkaas ayaa horay loo ganaaxay sanadkii 2016/17 keddib markii looga shakiyay in ay ku xadgudbeen xeerarka Champions League kulan ay khasaare kala kulmeen naadiga Dinamo Zagreb Sanadkii 2015.
Kulankaas wuxuu ahaa markii ugu horreysay ee koox ka dhisan dalka Albania ay soo gaarto ciyaaraha is reereebka ee loogu soo gudbo Guruubyada koobkan Champions league.
Lugtii hore kooxda Martida loo ahaa ee Dinamo ayaa 10 ciyaartoy kusoo adkaatay, Skenderbeu ayaana khasaartay markii 4-1 lagu garaacay. Waxay sidoo kale ku khasaareen 2-1 ciyaartii ka dhacday Albania.
Hadda wargeyska The Guardian ayaa wariyay in Qish la helay uu muujinayo in Uefa ay kooxdan ka ganaaxday 10-sano ciyaarista kubadda cagta ee Qaaradda.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Skenderbeu “ay ku xadgudbeen ciyaarista kubadda cagta sideeda oo kale waligeed ma aysan sameyn tanoo kale”.
Waxay sheegayaan in kooxdu ay u shaqeeyeen sida Gaari loogu talagalay Dembiyada Abaabulan, waxaana jira kulamo dhan 53 Ciyaarood oo looga shaki baxayay kooxdan in ay tahay mid aan ciyaaraheeda sii wadi Karin iyo in kale, iyadoo kulamadaas ay ka koobnaayeen horyaalka iyo Ciyaaro Saaxiibtinimo.
Intii u dhexeysay November 2010 ilaa April 2016 ayaa ah waqtiga kooxdan loosoo jeediyay Eedaha la xiriira Dembiyada loo heysto.
Kooxdaan ayaa loo heystaa sii deynta kooxaha ay la ciyaarto, iyadoo Qaadata xoogaa dhaqaale ah, waxaana lagu ogaaday ciyaartii kale ee ay la qaateen kooxda Northern Ireland ka socota Crusaders ciyaartaas waxay ka tirsaneyd Champions League waana lugta labaad ee is reereebka koobkan oo dhacday July 21, 2015-kii.
Skenderbeu ayaa ku badisay 4-1 lugtii hore, waxaana wax walba sii xaqiijisay markii 2-1 hoggaanka ciyaarta looga qabtay Lugtii labaad.
Balse kooxda Skenderbeu ayaa laga dhaliyay 2 gool 10-kii daqiiqo ee ciyaarta ugu dambeysay, waxayna taasi sii badisay Shakiga laga qabay Boqollaal kun oo Gani ayaa la rumeysanyahay in ay Qaateen, Crusaders ayaa sidoo kale laba gool laga diiday.
Warbixinta ayaa intaas ku dartay “Xushmad uma hayaan Sumcadda ciyaaraha”, sida ay sheegtay The Guardian.
Marka lagu laabto February Sanadkan, kumannaan Taageerayaal ah ayaa ka qeyb qaatay Bannaanbax Nabadeed oo ka dhacay magaalada Korca, halkaas oo kooxdu ay deggantahay.
Wargeys lagu magacaabo Tirana Times ayaa soo Uruuriyay Oraahda kuwa dibadbaxayay “Ha dilina riyooyinkeenna,” “Waxaan ku noolnahay kubadda cagta, waan jecelnahay Skenderbeu,” “Magaaladeennu Dembiile maahan, Magaaladeennu Cadaalad ayey u baahantahay.
Waxaa kale oo laga aqriyay qoraalladooda: “8-dii sano ee lasoo dhaafay, Skenderbeu waxay aheyd Farxadda Magaaladaan. Kubadda cagtu waa ciyaaraha ugu weyn Korca, waa midda aannu aaminsannahay.
“Halkan Korca ah, wuu aaminsanaa wuuna Aamini doonaa waa koox hannaan ciyaareed oo Xalaal ah leh, waxayna hanatay 6 horyaalka gudaha ah waxayna 2 mar kasoo muuqatay Europa League.”
Wakiillada kooxda, Maamulka iyo Ciyaartoyduba waqtiga loo heysto Dacwadaha dhammaantood baaritaan ayaa ku socda in kastoo ay Beeniyeen sida muuqata Eedeymaha loosoo jeediyay ee la xiriira in ay kulamada fududeeyeen oo ay lacag dhaafsadeen Sumcadda.
Waxaa Turjumay Muuse Cabdi Cabdulle